Izizathu ezingaphezu kwekhulu zokuqinisekisa ngohambo lwakho lwesikebhe | Izikebhe ze-Absolut
Izizathu ezingaphezu kwekhulu zokuqinisekisa ukuhamba kwakho ngesikebhe
U-Ana Lopez | | General
Lapho sihamba noma sibhukha i-cruise yethu asithandi ukucabanga ukuthi kufanele sikuqinisekise, kungaba ngenxa yokukhansela, ukulahlekelwa, ukugula noma ukweba, noma kunjalo, lapho kwenzeka okuthile okungalindelekile kuwe, uyajabula ukuthi uthathe umshwalense. Ngokusobala, ayikwenzeli ubunzima bokuqala nokucasulwa kobubi, kepha okungenani yebo uyanxeshezelwa.
Endabeni yokuhamba ngezikebhe, ngenxa yezici zazo ezikhethekile, kunezikhathi lapho umshwalense ojwayelekile wokuvakasha ungazibandakanyi zonke izehlakalo nezehlakalo ezingalindelekile ezingavela, futhi kufanele umemezele ukuthi uhambo lwesikebhe. Ngincoma ukuthi ufunde kahle le ndatshana, ikakhulukazi uma ungenalo ulwazi oluningi lapho usohambweni.
1 Ukukhansela noma ukukhansela umshuwalense
2 Umshuwalense onokutholakala kwezokwelapha
3 Umshuwalense wokulahleka kwempahla
4 Impela emkhunjini wokuhamba ngesikebhe, kepha ngiyabanjwa emhlabathini
Ukukhansela noma ukukhansela umshuwalense
Yeka ukuthi ama-cruise ajwayele kangakanani bhuka isilinganiso sezinsuku ezingama-71 ngaphambi kwesikhathi, kungenzeka, ukuthi uma umzuzu usondela, kufanele uyikhansele. Ngolunye usuku abanye abangane bangitshele ukuthi bambizele indawo yokuvota futhi baphuthelwa uhambo, kodwa okungenani bakwazile ukushintsha usuku ngaphandle kwenkokhiso.
Kubalulekile ukuthi ukwazi lokho Akuwona wonke ama-cruise adingekayo ukunxephezela uma kwenzeka uhambo lukhanseliwe noma kungenziwa noma yikuphi ukuma, ngaphezu kwesimo sezulu esibi okuphoqelela ukushintsha inkambo. Kungcono uhlole amathuba okubuyisa imali yakho, noma okungenani ingxenye enkulu yayo, ngaphambi kokuvala uhambo lwakho. Lokhu ukukhanselwa yinkampani enikeze ngesikebhe, kepha Enye into ukuthi unquma ukuyikhansela.
Lapho uthatha isinqumo sokuqinisekisa i-cruise yakho, into yokuqala okufanele uyazi izizathu ezingakuholela ekutheni ukhansele uhambo lwakho, ngokwesibonelo, kunezikhathi lapho zingakuvumeli ukuthi uhambe ngoba usesikhathini sokukhulelwa esithuthukile, kanti futhi imali yakho awuyitholi.
Kwesinye isikhathi umshwalense uyakusibekela ezinye izehlakalo ezingalindelekile ezifana nezimo eziphuthumayo zomndeni, izinhlekelele zemvelo, ingozi, ukugula…. Inani olifakile kumshwalense lizobuyiselwa inqobo nje uma ukwesulwa kucatshangelwe ezigabeni zomshuwalense. Nalu uhlu lwe amathiphu wokuhamba ngesikebhe okokuqala.
Kukhona ezinye izinkampani zomshuwalense ezinamanani amisiwe ngokuya lapho uya khona kulowo ohambayo nabanye abafaka iphesenti lokubuyiselwa enanini lohambo. Le mbuyiselo ingu-5% ngaphezulu noma ngaphansi, futhi inqobo nje uma imbangela ifanele. Iso! Ngoba uma ukhokha amathikithi we ukuhamba ngekhadi lesikweletu, okunye kufaka ukumbozwa kokukhansela. Thola kahle uma ikhadi lakho likunikeza lokhu kufakwa.
Umshuwalense onokutholakala kwezokwelapha
Omunye umbuzo obalulekile lapho uzohamba izinsuku ezimbalwa, uwukuthi kwenzekani uma udinga umshuwalense wezempilo. Sikutshele kanjani kwezinye izikhathi, emikhunjini yemikhumbi kukhona usizo lwezokwelapha, yize lokhu kubiza impela, ngaphandle kokuthi unomshuwalense wezokwelapha obhekele ukuhlolwa kwezokwelapha kanye nemithi. Njengomthetho umshuwalense ophakathi nendawo ukumboza kuze kufike kuma-euro ayizinkulungwane ezingama-30.000 wezindleko zokwelashwa ezandayo, futhi lokhu kufaka izindleko zamazinyo.
Umshuwalense wokulahleka kwempahla
Lesi yisihloko impela. Kunjalo kakhulu Akujwayelekile ukuthi imithwalo ilahleke emkhunjini wokuhamba ngoba ukuthunyelwa kwenziwa ethekwini elifanayo. Kodwa-ke, okungenzeka ukuthi uthathe uhambo lwendiza oluhlangene kanye ne-cruise nokuthi esigabeni sokuqala izikhwama zakho zilahlekile. Uma ungenayo umshuwalense endizeni, ezinye izinkampani zomshuwalense wokuhamba ngesikebhe ziqinisekisa ubuncane bomthwalo wakho, Kepha kunjalo, lokho akusho ukuthi uzoyithola. Sikhuluma ngesinxephezelo kuphela.
Impela emkhunjini wokuhamba ngesikebhe, kepha ngiyabanjwa emhlabathini
Emikhunjini, icala lokuphanga emakhishini akuvamisile ukwenzeka, empeleni. Kepha Yebo, kungenzeka ukuthi uma wehlela ethekwini isikhwama sakho sebiwe noma silahlekile. Uma kunjalo, kufanele ubone ukuthi ngabe umshwalense wakho uhlanganisa kuphela imicimbi engalindelekile ebhodini noma uma ubheka nokubi emhlabeni.
Sincoma ukuthi ubuze ifayela le- ukumbozwa kwemali kusengaphambili. Lokhu ngukuthi uma amakhadi akho entshontshiwe noma elahlekile ungasebenzisa imali ethile uze uyithole, futhi akuyona into encane uma usuka ethekwini uye ethekwini. Okungenani kwenza kube lula kuwe ukuqhubeka nokujabulela iholide lakho.
Siyethemba ukuthi ngalezi zeluleko sikusizile ukuthi uthathe isinqumo ngomshwalense wakho wokuhamba ngesikebhe esihamba phambili, into engithemba ukuthi akudingeki uyisebenzise, ​​kepha uma kudingeka, uzojabula ngokuthi ukwenzile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » General » Izizathu ezingaphezu kwekhulu zokuqinisekisa ukuhamba kwakho ngesikebhe
Zonke izinkinobho, ngokusho kwenkampani yokuthumela, zokuziphatha kuhambo olwandle